Stator fingotra sy rotor an'ny ...
Fehikibo mpampitohy Ny fehikibo mpampita no mpanelanelana amin'ny rafitra mpampita fehikibo (matetika nohafohezina ho mpampita fehikibo). Ny rafitra mpampita fehikibo dia iray amin'ireo karazana rafitra mpampita. Ny rafitry ny mpampita fehikibo dia misy pulley roa na maromaro (indraindray antsoina hoe amponga), miaraka amina tadiny mitondra mpanelanelana - ny fehikibo mpampita - izay mihodina manodidina azy. Ny iray na roa amin'ireo pulley dia matanjaka, mampihetsika ny fehikibo sy ilay fitaovana amin'ny fehikibo mankany aloha. Ny pulley mandeha amin'ny herinaratra dia antsoina hoe drive pulley mandritra ny ...
Ny fantsom-by vy nilahatra polyurethane dia vokatra azo avy amin'ny fantsom-panafihana azo zakaina, izay be mpampiasa amin'ny fantsom-pitrandrahana mineraly sy ny fantsom-pandefasana tailing. Ny toby famokarana solika-solika dia mampiasa ny fantsom-panafody ho an'ny rafitra fanonganana arintany sy lavenona, ary koa ho an'ny indostrian'ny solika, simika, simenitra ary voamaina. Endri-javatra 1. mahazaka-mahatohitra 2.Prevent Scaling 3.Corrosion fanoherana 4. fanoherana ny fahanterana hidrolisis 5. Elasticity avo 6. fanoherana ny fikorontanana mekanika 7. Ny famonoana tena Arex dia misafidy ny ...
Ruby Stator sy rotor ny flotation machine
Ny stator sy ny rotor, izay ampiasaina amin'ny milina fampidirana XJK, andiany XJQ, andiany SF, andiany BF, andiany KYF, andiany XCF, andian-tsarimihetsika JJF, andiany BS-K. Ny rotor sy ny stator an'ny masinina fampidinana dia matetika no ampidirina amin'ny sisin-taolana vy sy ny fingotra mahazaka. Ny sisin-taolana vita amin'ny vy dia vita amin'ny fanapahana ny lelafo ary avy eo atsofoka tsara eo ambanin'ny fenitry ny fizotrany. Ny tanjaka sy ny fifandanjana ataon'ny sisin-taolana dia azo antoka amin'ny alàlan'ny fandanjana ny detection amin'ny alàlan'ny ...
Fitaovana Hydraulika & Couplings haingana & Staple-Lock Adapter & Hydraulika Tube
Staple & lock adapters Arex dia mifantoka amin'ny fahazoana tombony amin'ny famolavolana, ny fanamboarana ary ny famatsiana ny vahaolana amin'ny fampitana rano, ny singa ary ny fitaovana mifandraika amin'ny fampiharana hidradradradrana avo lenta. Voarohirohy ao anatin'izany, izy ireo dia manam-pahaizana manokana, mpanamboatra mpanamboatra staple sy valves baolina ampiasaina betsaka amin'ny asa fitrandrahana ambanin'ny tany. Ny fifandraisan-doha dia ampahany lehibe amin'ny fizaran-tany hydraulic amin'ny fitrandrahana ary manana rakitsoratra efa voaporofo fa safidy tsara indrindra ho an'ny ...
Ny pads rehetra dia natao niaraka tamin'ny mpampiasa farany tao an-tsaintsika, mifantoka amin'ny kalitao sy ny famokarana. Ny mombamomba ireo pads dia tokony hifanaraka tanteraka amin'ny kiraronao mba hisorohana ny fihetsiketsehana tsy ilaina izay mety hitarika fanangonana potipoti-javatra, izay mety hampisy adin-tsaina amin'ny padanao amin'izay hahamora ny faharetanao. Ny fitambarana tonga lafatra koa dia midika hoe tabataba miasa mangina. Manome pad pad polyurethane sy pad padres ho an'ny mpanjifa izahay, izay mahatohitra tena mitafy sy manohitra harafesina ...
Fifanambarana metaly sy kibo
Inona no atao hoe sampana fanitarana? Ny fitambarana fanitarana dia ampiasaina amin'ny rafitra fantsom-panafody mba hisitrihana ny fanitarana na fiovana amin'ny terminal izay tsy ilaina na tsy mandeha amin'ny laoniny ny tadivavarana fanitarana. Ny fanitarana dia misy amin'ny endrika sy fitaovana maro samihafa. Izay fantsona mampifandray teboka roa dia iharan'ny karazana hetsika maro izay miteraka fihenjanana amin'ny fantsona. Ny sasany amin'ireo antony mahatonga ireo adin-tsaina ireo dia ny tsindry anatiny na ivelany amin'ny mari-pana miasa. Ny lanjan'ilay fantsona mihitsy sy ny pa ...
Ny Dismantling Joints dia mitana andraikitra lehibe amin'ny famolavolana sy ny fametrahana ny fantsona sy valves. Izy ireo dia fanampiana tena ilaina mandritra ny fametrahana sy fanesorana ireo faritra sy valves amin'ny fantsona. Raha tsy misy ny famongorana ny fiaraha-miombon'antoka manolotra fanitsiana lava, dia saika tsy azo atao ny mampiditra valizy amin'ny faritra fantsona. Noho io fanitsiana ny tonon-taolana io, ny valva dia azo apetraka eo akaikin'ny tonon-taolana, ary ny fivongorana dia azo apetraka amin'ny halavany takiana prio ...
Polyurethane Stator Sy Rotor Of Flotation Machine
Ny stator sy ny rotor, izay ampiasaina amin'ny milina fampidirana XJK, andiany XJQ, andiany SF, andiany BF, andiany KYF, andiany XCF, andian-tsarimihetsika JJF, andiany BS-K. Ny stator sy ny rotor no singa afovoan'ny milina fampidinana, izay ampiharina indrindra amin'ny tombotsoan'ny metaly na tsy metaly. Ny stereo polyurethane sy ny rotor dia an'ny karazan-tsolika tsy mahazaka milina fanamoriana misy fananana be, satria polyurethane dia manana tanjaka lehibe toy ny plastika ary elastika avo toy ny fingotra. Fitaovana manokana configu ...
Vokatra vita amin'ny fingotra sy plastika namboarina
Fanodinana dcustomization ho an'ny vokatra vita amin'ny fingotra sy plastika Dingana mahazatra amin'ny famoronana ny famokarana fingotra toy ny etsy ambany https://www.arextecn.com/uploads/66f24654.mp4 Vovon-tsolika fangaro fampangaroana horonan-taratasy ary famokarana volo-bolo fanodinana asa tanana samihafa ho an'ny plastika zavatra toy ny etsy ambany famolavolana tsindrona; (faritra be plastika) Famolavolana tsofina; (tavoahangy plastika) Fanangonana plastika; (sarimihetsika plastika miendrika endrika) Extrusion; (fantsona plastika) Fiainana miasa Mampiroborobo ny hevitrao izahay mba ho tanteraka ao anatin'ny ...
Tube malefaka malefaka malefaka
Ny fantsom-bozaka vita amin'ny slurry slurry dia ampiarahan'ny fingotra sentetika NR, BR ary SBR. Izy io dia mampiasa lamba matanjaka avo lenta miaraka amin'ny peratra vy ho toy ny taolam-panamafisana. Ny fantsom-bozaka matevina dia apetraka eo anelanelan'ny paompy sy ny mpanapaka ny dredger, izay mitondra tsindry miasa ratsy mandritra ny fizotran'ny slurry. Ny fantsom-bovitra malefaka sy fantsom-piadiana mifono vy, miaraka amin'ny peratra vy ao anatiny, dia mety amin'ny famindrana ireo lemaka masiaka, zavamaniry fanodinana mineraly, t ...
Ny fantsom-paritra vita amin'ny kofehy vita amin'ny seramika dia ampiasaina amin'ny toe-javatra mahery setra indrindra izay ilana fantsom-pohy tsy mitongilana mahazatra. Ary koa, ny fantsom-bozaka vita amin'ny kiranika dia azo apetraka amin'ny karazana milina hovitrovitra na amin'ny fitaovana tsy mijanona. Izy io dia afaka mampitombo ny fisafidianana ireo injeniera miaraka amin'ny fomba fampiasa amin'ny fametrahana sy ny asany. Endri-javatra 1. mitafy fanoherana Ny fanoherana ny fiakanjoan'ny fantsom-bozaka vita amin'ny seramika dia avo 10 heny noho ny an'ny vy tsotra ...
Sivana ny milina fanontam-pirinty
Ny indostrian'ny AREX dia mamatsy kojakoja fanontana fanontam-pirinty hanitarana ny fahaizan'ny rafitra sivana fanaovan-gazety. Ny milina fanontam-pirinty dia ampiasaina amin'ny asa fisarahana ranoka / matevina. Ny sivana faneriterena dia mampiasa sivana tsindry hampisaraka ny ranoka sy ny solida, izay ampidirina ao anaty sivana ny slurry ary maina amin'ny tsindry. Amin'ny ankapobeny, ny sivana fanaovan-gazety tsirairay dia natao arakaraka ny habeny sy ny karazan'ilay slurry mila tsy ho maina rano. Ny singa efatra lehibe amin'ny sivana dia misy ...